नेपालमा लकडाउन खुकुलो भएपछि सङ्क्रमण दर बढ्दै
निशान न्युज श्रावण १८, 2077
काठमाडौँ । लकडाउन खुकुलो भएयता कोरोना सङ्क्रमित हुनेको सङ्ख्या बढेको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार लकडाउनअघि र खुकुलो भएपछिको अवस्थामा सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार लकडाउन खुकुलो भएपछिको ११ दिनमा दुई हजार ९२ जना सङ्क्रमितको पुष्टि भएको छ । जसमध्ये पछिल्लो पाँच दिनमा मात्रै एक हजार तीन सय जनाभन्दा बढी सङ्क्रमित भएका छन् । लकडाउन खुकुलो हुनुअघिको ११ दिनमा सङ्क्रमित हुने एक हजार ३४५ रहेको थियो । मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले परीक्षणको दायरा बढेकोले समेत सङ्क्रमित बढी भएको जानकारी दिए ।
उनका अनुसार असार २७ गतेदेखि साउन ६ गतेसम्म ४७ हजार ८७७ जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको थियो । उक्त अवधिमा सङ्क्रमण दर २.८ प्रतिशत रहेको थियो । अर्थात उक्त अवधिमा प्रति एक सय जनाको परीक्षण गर्दा करिब २.८ जना नयाँ सङ्क्रमितको पुष्टि भएको थियो ।
लकडाउन खुकुलो भएपछिको ११ दिनमा ५८ हजार १७४ जनाको स्वाब परीक्षण गरिएको छ । साउन ७ गतेदेखि साउन १७ गतेसम्ममा दुई हजार ९२ जना सङ्क्रमितको पुष्टि भएको हो । लकडाउन खुकुलो भएयताको अवधिमा सङ्क्रमण दर ३.६ प्रतिशत पुगेको छ । लकडाउनअघि र पछिको एघार दिनमा शून्य दशमलव आठ प्रतिशतले सङ्क्रमित बढेका छन् ।
नेपाली वेलफेयर सोसाइटी युकेको संयोजनमा म्याग्दीको मराङमा राहत वितरण
म्याग्दी । म्याग्दी जिल्लाको धौलागिरी गाउँपालिका वडा नं. ६ मराङ बाढी पहिरोबाट पीडित ९० घरपरिवारला...
बिहीबार राति १२ बजेदेखि भदौ ५ गते राति १२ बजेसम्मका बुटवलमा लकडाउन
बुटवल । समुदायस्तरमा कोरोना भाइरसको संक्रमण तीव्र हुँदै गएपछि बुटवल उपमहानगरपालिकाले लकडाउन गर्ने...
काठमाडौँ । सूचना तथा प्रसारण विभागले प्रेस प्रतिनिधि प्रमाणपत्र जारी तथा नवीकरण तत्कालका लागि स्थ...
जिल्ला प्रशासनले दिने सवारी पास अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि बन्द
काठमाडौं । सरकारले एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा जानका लागि वितरण गर्दै आएको सवारी पास बन्द गर्ने भ...
दुर्घटनामा हजुर बुवा र नातिनीको मृत्यु
सप्तरी । सप्तरीमा भएको जिपले मोटरसाइकललाई ठक्कर दिँदा हजुरबुवा र नातिनीको मृत्यु भएको छ । स ७ प ८...
काठमाडौँ । वायुसेवा सञ्चालक सङ्घले लामो समयको बन्दाबन्दीले गर्दा हवाई उद्योग अब धराशयी हुने अवस्थ...